ကိုဗစ်စည်းမျဉ်း မလိုက်နာလို့ အမေရိကန်သံရုံးမှ နှစ်ဦးကို အရေးယူမည်ဟု စစ်ကောင်စီကြေညာ - Myanmar Globe
ဧရာဝတီ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၂
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအား လိုက်နာမှုမရှိသည့်အတွက် အမေရိကန်သံရုံးမှ သံတမန်ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားသူတဦးနှင့် ဝန်ထမ်းတဦးအား အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ကြေညာလိုက်သည်။
လေကြောင်းမှ အမေရိကန်သံတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူတဦးသည် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် ၄ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်နေ့တွင်လည်း အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်းတဦးမှာလည်း ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် ၆ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ဆိုသည်။
သို့သော် ၎င်းတို့နှစ်ဦးအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားသည့် Quarantine နေထိုင်ရမည့် စည်းမျဉ်းများအား လိုက်နာမှုမရှိဘဲ ၎င်းတို့အစီအစဉ်ဖြင့်သာ ကုသမည်ဟုဆိုကာ သံရုံးဝန်ထမ်းတဦးနှင့် အပေါင်းအပါများက ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်အတွက် စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ကိုဗဈစညျးမဉျြး မလိုကျနာလို့ အမရေိကနျသံရုံးမှ နှဈဦးကို အရေးယူမညျဟု စဈကောငျစီကွညော
ဧရာဝတီ၊ ဇနျနဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၂
ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါဆိုငျရာ စညျးမဉျြးမြားအား လိုကျနာမှုမရှိသညျ့အတှကျ အမရေိကနျသံရုံးမှ သံတမနျဗီဇာကိုငျဆောငျထားသူတဦးနှငျ့ ဝနျထမျးတဦးအား အရေးယူမညျဖွဈကွောငျး အာဏာသိမျးစဈကောငျစီက ကွညောလိုကျသညျ။
လကွေောငျးမှ အမရေိကနျသံတမနျနိုငျငံကူးလကျမှတျ ကိုငျဆောငျထားသူတဦးသညျ ဇနျနဝါရီ ၂ ရကျနကေ့ မွနျမာနိုငျငံသို့ဝငျရောကျလာပွီးနောကျ ၄ ရကျနတှေ့ငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးစဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး၊ ဇနျနဝါရီ ၃ ရကျနတှေ့ငျလညျး အမရေိကနျသံရုံးဝနျထမျးတဦးမှာလညျး ဝငျရောကျလာပွီးနောကျ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးစဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး စဈကောငျစီက ဆိုသညျ။
သို့သျော ၎င်းငျးတို့နှဈဦးအနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနကခမြှတျထားသညျ့ Quarantine နထေိုငျရမညျ့ စညျးမဉျြးမြားအား လိုကျနာမှုမရှိဘဲ ၎င်းငျးတို့အစီအစဉျဖွငျ့သာ ကုသမညျဟုဆိုကာ သံရုံးဝနျထမျးတဦးနှငျ့ အပေါငျးအပါမြားက ပွနျလညျချေါဆောငျသှားသညျ့အတှကျ စဈကောငျစီနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနအနဖွေငျ့လညျး ပွငျးထနျစှာကနျ့ကှကျကွောငျး ကွညောခဲ့သညျ။
Posted on 05/01/2022 05/01/2022 Author Admin
ပုဂံရှိ ဉာဏ်တော်အမြင့်ဆုံး သဗ္ဗညုဘုရားကြီးကို တရုတ်အစိုးရက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည် တရုတ်နိုင်ငံ စန်ရှီးပြည်နယ်မှ စေလွှတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် ၄ ဦးပါဝင်သော လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကျူဝင်ပြီးနောက် ပုဂံသို့ သွားရောက်ကာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကနဦးပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု တရုတ်သံရုံးက ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၄ရက်မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့သည် သဗ္ဗညုဘုရား စီမံကိန်းနေရာသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့တဲ့ အရေးပေါ်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း အသေးစိတ် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းနှင့် လာမည့် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်း တရားဝင် စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းပါ သံရုံးက ဆိုထားပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် […]
“နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှု သုံးခု ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် အမိန့်ချမယ်လို့ ဆို”
Posted on 06/01/2022 06/01/2022 Author Admin
“နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှု သုံးခု ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် အမိန့်ချမယ်လို့ ဆို” နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေထဲက အမှုသုံးမှုကို နောက်တစ်ပတ် တနင်္လာနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှာ အပြီးသတ်အမိန့်ချမယ်လို ဒီနေ့ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ တရားရုံးနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူကိုယ်တိုင် ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ စွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက် နှစ်ဖက်လုံးက အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအမှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ သြဂုတ်လတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်ကိုလာစဉ် လူစုလူဝေးဖြစ်ခဲ့လို့ ကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့ မညီဘူးဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့အမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ […]
သာကောတို့ လက်ချက်မိသွားရပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဖရဲသီးစိုက် တောင်သူများ….
Posted on 15/01/2022 15/01/2022 Author Admin
သာကောတို့ လက်ချက်မိသွားရပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဖရဲသီးစိုက် တောင်သူများ…. ( ဒီလိုသာ အရှုံးပေါ်ချက်က တရားလွန်ဖြစ်နေရင် ရှေ့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ… ) မူဆယ် ၁၀၅မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တရုတ်နိုင်ငံကို တင်ပို့နေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံထွက် ဖရဲသီး ဈေးများမှာ ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီး တောင်သူနှင့်ကုန်သည်များ အရှုံးပေါ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း မူဆယ်၁၀၅မိုင်ရှိ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်မှ သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့သည့် ဖရဲများမှာ ယခင်က တစ်ကီလိုလျှင် ၇ယွမ်မှ ၈ယွမ်အထိ ပေါက်ဈေး ရရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ဈေးကွက်မှာ တစ်ကီလိုလျှင် ၅ ယွမ်နှင့်အောက်အထိ ကျဆင်းသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ “ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖရဲဈေးများကြမ်း တမ်းစွာဈေးကျဆင်းနေပါတယ်။ ဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကြာမြင့် ရက်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် ချင့်ချိန်တင်ပို့သင့်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ဈေးကွက်အခြေအနေမှာ ၅ […]